विस्थापित भोकभोकै |
-राहत वितरणमा ढिलाइ -सडक र जंगलमा बास -पानी छेक्न त्रिपाल छैन -शुद्ध खानेपानीको अभाव
प्रकाशित मिति :2017-08-15 11:28:26
-ठाकुरसिंह थारू, कमल पन्थी–
बाँके/बर्दिया । श्रावण ३१, २०७४- टिकुलीपुरकी धनी खत्री दुई छोरासहित प्लास्टिकले बेरिएको टहरामुनि बसेकी छन् । छेउमा पाडो बाँधिएको छ । भुइँ हिलाम्मे छ । चुलो नबलेको तीन दिन भइसक्यो । यो परिवार निदाउनसमेत पाएको छैन ।
अधिकांशको पीडा यस्तै छ । स्थानीय प्रशासन यी सबै कुराबाट बेखबर छ । यहाँका बाढी पीडितले पानी छेक्ने त्रिपालसमेत पाएका छैनन् । केहीले वर्षा छल्न प्लास्टिकको टहरा बनाएका छन् । तिनले पानी छेक्दैन । पीडित परिवारको बिचल्ली छ । शुक्रबार राति आएको बाढीले घर भत्किएपछि खत्री परिवार नजिकैको जंगल छेउमा ओत लाग्न आएको हो ।
‘तीन दिन भयो, चुलो बलेको छैन । खाना कसरी पकाउने ? भाँडाकुँडा र खाद्यान्न घरमै पुरियो । अहिले आश्रय लिइरहेको ठाउँमा हिलो जमेको छ,’ राप्ती सोनारीस्थित टिकुलीपुरकी धनीले भनिन्, ‘सोमबार भइसक्यो । अहिलेसम्म समस्या बुझ्न कोही आएको छैन ।’ त्यही नजिकैको अर्को टहरामा भेटिइन्, सरस्वती खत्री । ६ वर्षीया छोरी गीता काखमा थिइन् । हिलो छल्न उनी दाउराको चिर्पटमा बसेकी थिइन् । उनले छाप्रोमै बाख्रा बाँधेकी छन् ।
बाढीपछि उनको घरमा पनि चुलो बलेको छैन । ‘हामी भोकभोकै बसेको कसले हेरिदिने ? खानका लागि केही छैन । शरीरमा भएको यही लुगा हो । भिजेकै लुगा लगाएका छौं,’ सरस्वतीको गुनासो छ । बाढीले डुबान र कटानमा परेका बाँकेका पीडितले त्रिपालसमेत पाएका छैनन् । उनीहरू हिलोमै प्लास्टिक टाँगेर बसेका छन् । बाढीपीडित बस्तीमा खाद्यान्नसमेत पुगेको छैन । राहत सामग्री नपुग्दा विस्थापितहरू भोकै छन् । उनीहरूले तत्काल राहत पठाउन आग्रह गरेका छन् । ‘भेट्नसमेत सरकारी मान्छे बस्तीमा आएनन् । यस्तो विपत्का बेला पनि सरकार मौन बसेपछि दु:खी छौं,’ मनीषा केसीले भनिन्, ‘हिलोको बसाइ छ । अनिँदो र भोकै बसेको तीन दिन भइसक्यो ।’
राप्ती सोनारी, डुडुवा, नरैनापुर र बैजनाथ गाउँपालिकाका हजारौं पीडित सरकारी राहतको पर्खाइमा छन् । उनीहरूलाई सामुदायिक भवन, विद्यालय, मन्दिर, प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक वनमा राखिएको छ । बाढीले करिब तीन हजार परिवार विस्थापित भएका छन् । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ टिकुलीपुर, वडा नम्बर ३ धामपुर, लालपुर, खैरेनी, चिलारिया, पनेरिया, नरैनापुर गाउँपालिकाको विसम्भरपुर, सोनवर्षा, डुडवा गाउँपालिकाको खल्ला झगडिया, टेपरी, होलिया, खडैचा र खजुरा गाउँपालिका पुरैनी र बैजनाथ गाउँपालिकाको सम्झना चोकलगायतका दर्जन बढी गाउँहरू डुबानमा परेका छन् । बाँकेका प्रजिअ रमेश केसीले बाढीपीडितहरूको उद्धार र राहतका लागि काम भइरहेको बताए । उनले सोमबार कतिपय बाढीपीडित बस्तीहरूमा राहत सामग्री पठाइरहेको जानकारी दिए ।
बर्दिया, गुलरिया ११ का बिक्री, टडुवा, सूर्यगौडी, टेपरी, मस्जदियालगायत क्षेत्रमा दुई दिनदेखि पिउने पानीको अभाव भएको छ । उक्त क्षेत्रका करिब पाँच सयबढी घर डुबानमा परेका छन् । हाते पम्पसमेत डुबानमा परेपछि पानीको हाहाकार मच्चिएको हो । सुरक्षित स्थानमा बसेका हजारभन्दा बढी पीडित दुई दिनदेखि भोकै छन् ।
प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, पिउने पानी, औषधि र पर्याप्त कपडाको अभाव रहेको पीडितहरूको गुनासो छ । छिनछिनमा पानी पर्ने गरेकाले ओत लाग्ने ठाउँको समेत अभाव हुन थालेको बाढीपीडितले बताए । सुत्केरी, गर्भवती, वृद्ध र बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । गुलरिया ८ की विमला सुनारले दुई दिनदेखि सडकको बास भएको बताइन् । ‘चा उचाउ र भुजा खाएर बाँचेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘छोराछोरीले भात खान पर्‍यो भन्छन् । चामल छैन कताबाट खुवाऊँ ?’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम आचार्यले पिउने पानीका लागि खानेपानी कार्यालयलाई निर्देशन दिइएकाले छिट्टै समस्या समाधान हुने बताए ।